Dowlada Australia oo sheegtay in ay fashilisay qorshe argagixisnimo
Home /Blog/Dowlada Australia oo sheegtay in ay fashilisay qorshe argagixisnimo
Booliska dalka Australia ayaa ka hortagay qorshe argagixisinnimo ah oo looga gol-lahaa in lagu soo rido diyaarad, sida uu sheegay ra’iisalwasaaraha dalkaasi Malcolm Turnbull. Afar nin ayaa loo xoray falkaasi.
Baarayaasha dalkaasi Australia ayaa sheegaya in ay heleen macluumaad ku saabsan in la qarxiyo diyaarad, iyada oo la adeegsanayo walxaha qarxa ee guryaha lagu farsameeyo.
Ra’iisalwasaaraha dalkaasi Malcolm Turnbull ayaa sheegay in qorshahaasi hadda la fashiliyay oo la qaaday hawlgal weyn oo ka dhan ah argagixisada.
Afar nin ayaa gacanta lagu soo dhigay oo xabsiga la dhigay kaddib markii ciidamado boolis ah oo aad u hubeysan iyo kuwa laanta mukhaabaraadka gudaha ay hawlgallo ka fuliyeen qaybo badan oo ka tirsan magaalada Sydney.
Haweeney sheegtay in wiilkeeda iyo seygeeda ay mid ahaayeen dadkii la qab-qabtay ayaa waxa ay beenisay in ay wax xiriir ah la lahaayeen kooxaha xag-jiriinta.
Tallaabooyin dhanka amniga ah oo dheeri ah ayaa la qaaday gaar ahaanna gegida diyaaradaha ee Sydney iyo qaybaha kale ee dalka.
Ra’iisalwasaare Turnbull ayaa ugu baaqay dadka safarka ah in ay is-dejiyaan, ayna hawlahooda u gutaan si ay kalsooni ku dheehan tahay. Heerka halista ee argagixisada dalkaasi Australia ayaa wali gaarsiisan meel sare.
Bal Daawo Odayaasha Magaalada Boosaaso ka hadlay Balaarinta Dekeda Boosaaso